ပရိယေသန ၀မ်းစာရေး … မှန်းကာတွေး ကွေးနေအောင်လည်း ကခဲ့ရတယ် (Credit to Min Aung Khaing) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » ပရိယေသန ၀မ်းစာရေး … မှန်းကာတွေး ကွေးနေအောင်လည်း ကခဲ့ရတယ် (Credit to Min Aung Khaing)	5
ပရိယေသန ၀မ်းစာရေး … မှန်းကာတွေး ကွေးနေအောင်လည်း ကခဲ့ရတယ် (Credit to Min Aung Khaing)
Posted by Travis Zaw on Apr 7, 2015 in Arts & Humanities, Celebrity, Cultures, Entertainment, Facebook, Jobs & Careers, Society & Lifestyle |5comments
ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရအမျိုးမျိုး လူကြီးအထွေထွေအကြိ်ုက်လိုက်ကာ အရောင်အသွေးပြောင်းနေရသော သုခုမ အနုပညာရှင်တွေ (အများစု) ကို လူတွေက ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ကြသည်ကို မကြာခဏ တွေ့ရသည်။
အနုပညာသမားဟူသည်ကား ဘုရင်လက်ထက်၊ အင်္ဂလိပ်လက်ထက် ၊ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလ၊ လွတ်လပ်ရေးရအပြီး (၁၉၄၈-၆၂)၊ ၁၉၆၂ တော်လှန်ရေး ကောင်စီတက်ရာမှသည် အသွင်ပြောင်းလာသော မဆလပါတီ လက်ထက်ကတည်းကစပြီး မင်းပွဲစိုးပွဲလည်းတက် ပြည်သူကိုလည်းဖျော်ဖြေ။ အစိုးရ၏မူဝါဒကိုဖြန့်ရာတွင် ပါဝင်ရ။
ဟော.. ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးကျတော့လည်း ပြည်သူနဲ့အတူ တက်တက်ကြွကြွရော သူများတွေပါ၍မလွှဲမရှောင်သာလို့ရော ပါလိုက်ကြပြန်။
တခါ အာဏာသိမ်းအပြီးကာလ..၁၉၈၉ လှေပြိုင်ကြီးမှအစချီကာ .စစ်အစိုးရက အခြေခိုင်လာသောအခါ န၀တ-နအဖ ကြံ့ဖွံ့ဇာတ်များ သူ့ကျွန်မခံ ပါပီမတွေ အဖေနဲ့သားတွေ ကြယ်တွေလတွေ တိမ်စင်တွေမှာ ရေဒီယို တီဗွီ အပြင်ပွဲများမှာ အဆိုတော်တွေ မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဒါရိုက်တာတွေ ဇာတ်မင်းသား မင်းသမီးတွေ လူရွှင်တော်တွေ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း အားတက်သရော ပါကြပြန်သည်။
ထောင်ထဲက လူတွေကို နည်းနည်းလေးတောင် အားမနာကြ။
ထိုစဉ်က အဓိကဦးတည်ချက်က ရိုးရိုးသားသားအနုပညာထုတ်လုပ်မှုများထက် ဒီမိုလိုလားပြည်သူ အများ၊ အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဒေါ်စုကိုပုတ်ခတ် စော်ကားဆန့်ကျင်ကာ တပ်မတော်နှင့် ကြံ့ဖွံ့ကြီးကို အမွှမ်းတင်ကြသော ဇာတ်များက ပိုကဲနေသည်။
အနုပညာက ကလောင်သွားလို ထက်လေတော့ အနုပညာသယ်ကိုပြည်သူက အများထက်စိတ်ဝင်စားကြတော့ သူတို့ကို အစိုးရတိုင်းကအသုံးချစမြဲ။
သတင်းအမှား အမြင်အမှားကို ပရိသတ် ဦးဏှောက်ထဲရိုက်သွင်းမှိုင်းတိုက်ဖို့ အရေးတွင် တေးရေးသူ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူတို့ကတော့ အဓိက အခရာ တရားခံများ။
ဒါရိုက်တာ သီဆိုသူ သရုပ်ဆောင်သူက ဒုတိယ ပံ့ပိုးပေးသူများ။
အားပေးကြည့်သူ ပရိသတ်က တတိယ။
ထိုအနုပညာအလွဲများကြောင့် မှိုင်းမိသွားသော လူငယ်များ (ခုနေခါ အသက် ၂၀-၃၀ကြား) ထုနဲ့ဒေး။
တခါ ၂၀၁၂ ။
ဒေါ်စု လွတ်လာသောအခါ သူမအနား အပြေးသွားကာ ၀န်းရံကြ။ ရင်ထဲကပါ၍လား ပေါ်ပင်လား။ ဒေါင်းပါတီကို ထောက်ခံဆောင်ရွက်ပေးကြ။
အခုတခါ သမတကြီး က တွေ့ချင်သည် ဆိုတော့လည်း ပြုံးပြကြ လေးစားညွှတ်တွားကြ။ အပြစ်ပြောလို့လည်းမရပါ။ အမည်တွေဖော်ပြရန်မလို။
သို့သော်လည်း စစ်အာဏာရှင်တို့၏ လက်ကိုင်ဒုတ် ၀ါဒဖြန့် သီချင်းရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းများတွင် မည်သည့်အနုပညာရှင်တို့က မည်မျှတက်ကြွခဲ့သည် … မည်သူတို့က ၀တ်ကျေတန်းကျေလုပ်ခဲ့သည်… မည်သူတို့က အတတ်နိုင်ဆုံးဆန့်ကျင်ရှောင်ရှားခဲ့သည်…မည်သူတို့က မည်မျှအနစ်နာခံ ဘ၀ပျက်ခဲ့သည်… မည်သူတွေက အရောင်အမျိုးမျိုးပြောင်းတတ်သည် …ကိုတော့ စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်သူများ အားလုံးသိကြပါသည်။
ပြည်သူချစ်သော အနုပညာရှင်အချို့လည်း ပြည်သူမုန်းသောသူများဖြစ်သွားခဲ့ရသည်။
ပရိယေသန ၀မ်းစာရေး … မှန်းကာတွေး ကွေးနေအောင်လည်း ကခဲ့ရတယ်..ဟူသော ရှေးက တေးစာသားလို အနုပညာဖြင့်ဘ၀ကိုရပ်တည်နေရသောကြောင့် ပရိသတ် ပြည်သူကျွေးသောထမင်းကို စားနေရသဖြင့် ပြည်သူကိုလည်းလေးစားရ။
မင်းတို့၏ ငြိုငြင်ခံရကာ အနုပညာလုပ်ဆောင်လှုပ်ရှားခွင့် ပိတ်ပင်ခံရပြန်က ထမင်းအိုးကွဲဦးမည်ကို လည်းစိုးရိမ်ရသည်။
ထိုမှတဆင့် လောဘဆင့်လာကာ မြေတွေကားတွေပါမစ်တွေ အခွင့်အရေးများကိုမျှော်ကိုးပြီး ပါဝင်ကြလည်းရှိသည်။
မိမိလက်ထပ်မိသူက ဘယ်ကမို့ ဘယ်သူ့သားမို့ အရောင်ပြောင်းကုန်ကြသည်လည်းရှိသည်။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအရ စိတ်ထားနူးညံ့ ပျော့ပြောင်းကြရခြင်း အပြင် ဂါရ၀တရားဆိုတာကြီး ကလည်းရှိနေပြန်သေးသည်။
တိတိကျကျပြတ်သားစွာ ရပ်တည်ရခက်နေရသူ အနုပညာရှင်များကို ပြည်သူကလည်း နားလည်ပါသည်။
ရင်ထဲက ခံယူချက်ရေရေရာရာ မခိုင်မာပဲ
ပွဲတကာတွင် လှတပတ ဖလန်းဖလန်းနှင့်ပါနေရဖို့ ၊
အာဏာပါဝါရှိသူမည်သူ့ကိုမဆို ပိုပိုသာသာဖော်လံဖားဖို့ ဖြစ်နေကြမည်ဆိုလျှင်တော့
နိုင်ငံတွင် ဘာက သေရေးရှင်ရေး အရေးကြီးနေပြီ၊ ပြည်သူအများက ဘာကိုလိုလားနေသည်ကိုသိပါလျက် မျက်ကွယ်ပြုနိုင်ကြသော ၊ (ပြည်သူချစ်သော အနုပညာရှင်)ဟူသော ၀ိသေသနှင့် မကိုက်ညီတော့သော၊
(သုခုမုပညာဖြင့် လုပ်စားနေသော ခံယူချက်မဲ့ စီးပွားရေးသမားများ) ဟုသာ ယူဆ သတ်မှတ်ရပေလိမ့်မည်။
ခင်ဇော် says: အသိထဲမှာလည်း အဲလို အရွယ်တွေက အရင်ပြည်သူတွေ ဘာတွေခံစားခဲ့ရတယ် ဆိုတာ မသိကြဘူးးး
ဖတ်စရာ စာတွေ ….
ကိုးကားစရာ ရုပ်သံတွေ မီဒီယာ အားလုံး အပိုင်စီးခံရလိုက်ရတာမို့လေ။
စလုံးမှာ လီကွမ်ယု က သူ့တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူအတွက် တာဝန်ကျေခဲ့သလို,
သူ့ ပြည်သူတွေကလည်းး သူတို့ မျိုးဆက်ကို ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ် လက်ဆင့်ကမ်းးပေးးပြီးး
ကျနော့် အသက်ထက် ငယ်သူတွေထဲမှာ…..
“ဒေါ်စု က ဘာလုပ်ပေးခဲ့လို့လဲ”
“စစ်အစိုးရ လုပ်ပေးခဲ့တာ ကောင်းသားပဲ” ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေတွေ့ရင် နောက် မျိုးဆက်အတွက် လုံလောက်တဲ့ အသိ လက်ဆင့်မကမ်းနိုင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်မကင်းးသလို ခံစားးရမိပြီ..
တချိန်တည်းးမှာပဲ ကိုယ့်ရရှိခဲ့တဲ့ အသိတွေ အတွက် လမ်းပြခဲ့တဲ့
ဆရာတွေ, စာအုပ်တွေ, စီနီယာတွေ ကို ကျေးဇူးးတင်မိတယ်..
Alinn Z says: ဗမာပြည်တွင်းက လက်ရှိ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်ဆိုသူတော်တော်များများ…
ဂီတအနုပညာရှင်လို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ သတ်မှတ်ထားသူတော်တော်များများကို…
အနုပညာရှင် စာရင်းထဲ မသွင်း ရေးချ မသွင်းးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: ဆရာဦးဝင်းဖေစကား.. အရကောက်ပြောရရင်တော့… အနုပညာဆိုတာ အတင်း” အား”နဲ့မလုပ်ရဘူးဆိုတာပဲ..။
“အား”ထည့်လုပ်နေသူတွေကို.. အနုပညာသည်တန်းမ၀င်ဘူး.. လို့သာပြောချင်မိတယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: အာ့ကြောင့်
အကြမ်းပညာသည်လို့ နာမည် ခံထားရတာ။
naywoon ni says: အနုပညာမှာ သာကူး​တွေရှိသလို ကဗျာတစ်​ပုဒ်​နဲ့လည်း ​ထောင်​ခုနှစ်​နှစ်​ အကျခံလိုက်​သူ​တွေရှိပါ​သေးတယ်​ ။ ​နောက်​ဆုံး သစ်​ရွက်​​ကြွေ​တွေကို တံမျက်​စည်းက လှည်းသွားသလို လူထုကို အကျိုးအပြုတဲ့ အနုပညာအတု​တွေကိုလည်း အချိန်​က တိုက်​စားသွားမှာ အ​သေအချာ …… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.